Sheekada Qarsoon Ee Ciyaarta Karoona Fayrus | Xaqiiqonews
Sheekada Qarsoon Ee Ciyaarta Karoona Fayrus
Sheeko xariireedka Karoona Fayrus, waxa ay soo caga dhigatay halkan, Soomaaliya, waana waqtiga aan is weydiin laheyn ” Maxaa ka dhab ah sawirka guud ee laga bixiyey cudurkan ee dadku qaar ku sifeeyaan “muusbo dabiici ah?”
Karoona ma lagu tilmaami karaa hardaganka ka dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha?
Ma jiraa shaki ah in Mareykanka uu gacantiisa ku abuuray cudurkan si uu ula dagaalamo dhaqaalaha Shiinaha?
Karoona ma loogu yeeri karaa sixir ku gadoomay saaxirka?
Qoraaga Saalax Qirad waxa uu aaminsanyahay in ay xoog badan tahay fikradda sheegeysa in cudurkani uu yahay “shirqool”.
Mareykanka oo kale, markii lagu dhawaaqay in cudurka uu dilaacay, dadweynaha waxaa la yaab ku noqotay war ka soo baxay DF-ka Mareykanka oo sheegay in waddanka uusan qaban karin wax ka badan afar milyan oo bukaan!
Waxaana laga wada dharagsanyahay in Mareykanka ay ku diyaarsantahay 925 kun oo sariir oo loogu talagalay xaaladaha jiifiska dag daga ah.
Dhanka kale Sep 2019, Wargeyska The Sun ee ka soo baxa Ingiriiska oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan hay’adda caafimaad QM, ayaa sheegay in aduunka uu qatar uga jiro cudur u ek hergab-shimbiraha, arinkaasi oo ahaa 3 bil ka hor inta aanan la shaacin sheeko xariira “karoona fayrus”.
Ha hilmaam Markii uu soo baxay Karoona, Trump ayaa jeediyey hadal isla-weyni ah isaga oo sheegay in Mareykanka uusan ku dhaceyn Karoona, hadii ay dhacdana ay leeyihiin qalab caafimaad oo tayo wanaagsan.
Haddaba aan is weydiina Su’aashan “Trump miyuu iska faanay? mise waxa uu fakiyey sir ay aheyd in uu qarsado.